Sikuphi embonini yokusansimbi nezimoto – Bayede News
Publisher - Iphepha Labohlanga
Sikuphi embonini yokusansimbi nezimoto
By Bayede-News	 On Jul 8, 2019
Ziklela kanjena eseziqediwe embonini ehlanganisa izimoto
Uma imoto seyimile lapho kukhangiswa khona izimoto ezintsha, noma uyibuka seyihamba emgwaqweni ungaze ucabange ukuthi yindala kunesintu. Kwabanye kungaze kube sengathi yinto eyalethwa nguMdali yemukelwa ngabathile ukuze bayisebenze bazuze, abanye bethembele kuyo. Omunye umnumzane wayegitsheliswe ngumakhelwane behamba ibanga elide, kwathi uma bebuya wezwakala encoma ethi, “uma ngingase ngibone umuntu owaqamba imoto ngingamnika u-10 sheleni.” Ngaleso sikhathi u-10 sheleni kwakuyimali enhle.
Imoto ingena ngaphansi kohlobo lwemboni ebizwa nge-automotive. Lolu hlobo lwemboni luhlanganisa lonke uhlobo lwezimoto nokunye okuhamba ngamasondo, nokusamshini. Uma siyibuka imoto akujwayelekile ukuba sicabange ngolwazi nangobuciko babantu ababumba bakhe izinhlobo ngezinhlobo zezimoto esizibonayo. Okuhle nje ngukuthi zakhiwa zikhiqizwe ngabantu abaphila kulo mhlaba njengathi.
Kunezinto ezimbalwa engifisa sikhumbuzane zona uma sikhuluma ngale mboni. Eyokuqala ezinhlotsheni zezimoto ezidumile ezikhona, nezithandwa kakhulu lapha eNingizimu Afrika, ayikho esungulwe lapha ezweni lethu. Lapha ngikhuluma ngezimoto kusuka kuToyota, Nissan, Mercedes, Volkswagen, Mazda, BMW, Isuzu, Ford nezinye. Singancomana sijabulelane ngazo, kodwa iqiniso limile elokuthi yimikhiqizo yamanye amazwe, nezinye izizwe. Lokhu kungasisiza ukuba sizihlole nathi njengezwe, nanjengohlanga ukuthi singangena kanjani kule mboni. Eyesibili ngeyokuthi ezimotweni ezikhiqizwayo aboHlanga abakabi khona kulabo abangabanikazi bezindawo noma izikhungo zokuthengisa lezimoto zisuka ngqo kubakhi bazo. Lapha ngikhuluma nge-dealership. Eyesithathu ngukuthi kusenenselelo enkulu aboHlanga ababhekene nayo yokuba ngabakhiqizi bezingxenye ezisetshenziswayo uma kwakhiwa imoto.
Lena yimboni ethi ibhekene ngqo nezimoto kodwa isabalale ifake izingxenye ezidingekayo uma kwakhiwa imoto, ngaphandle kwezinto ezifana namasondo namabhethri ezimoto. Ukwakhiwa kwemoto kudinga ulwazi lobunjiniyela lulumbane nolunye ulwazi lwamabhizinisi. Uma ubona imoto seyihamba, kusuke kuhlanganiswe izingxenye eziningi ezikhiqizwa ezindaweni ezehlukene. Kunabantu abakha amabholidi namascrews ehlukahlukene adingekayo kulolo nalolo hlobo lwemoto. AweToyota awafani nakaMercedes, njalonjalo. Ngithi angiqale ngokubukeka kukuncane kodwa okudinga ubuchwepheshe, ulwazi nemishini eqondene nalowo msebenzi wokukhiqiza izinhlobo ngezinhlobo zamascrews ahlanganisa izingxenye ezehlukene ezihlanganisa imoto. Libukeka lilula lelibhizinisi lokwakha ama-screws ngoba yinto ejwayelekile futhi encane, efanayo.
Ngenza isibonelo ngamascrews ukuze kucace ukuthi imoto iwumphumela wokuhlangana kosomabhizinisi, yilowo nalowo eletha lokho akwazi ukukwakha kuhlangane nokokuhlobisa kujabule abantu bathenge imoto. Ngithanda kucace ukuthi kulesikhathi ezinhlelweni zokwakha imoto kunezifundo ezithile okumele lowo okhiqiza noma yimuphi umkhiqizo kube uzenzile. Uhlobo lwensimbi esetshenziswayo uma kwakhiwa iscrew kumele luqikekelwe futhi kube ngoluhloliwe ukuze kungabi yinsimbi ekhumuzeka noma igqwale kalula nje nangokushesha. Uma ucabanga inani lezimoto ezisemigwaqweni yaseNingizimu Afrika, nalezo ezakhiwayo ezidayiswa lapha phakathi ezweni nalezi ezithunyelwa kwamanye amazwe, kuyacaca ukuthi kudingeka babe baningi osomabhizinisi abakhiqiza izingxenye ezidingekayo uma kwakhiwa imoto.
Noma iyiphi ingxenye eyakhiwayo kumele ifane ncamashi nenye. Ngakho-ke kule mboni akuthathwa noma ngubani nje, kodwa kumele umuntu ayisophe, bese ezilungiselela ngofanele ukuze akhiqize umkhiqizo osezingeni eliyilo. Ngalokhu engikulobe lapha ngifisa umuntu ofundayo azinike ithuba, angajabuleli nje ukushayela imoto noma ukuyigibela kodwa abukisise izingxenye ezakhe imoto, bese ecabanga. Kwesinye isikhathi aboHlanga bayazeya bazikhiphe emjahweni bengakaqali nokugijima, bazitshele ukuthi umsebenzi onje ungowabanye. Omunye uze alikhiphe elokuthi, “imoto yinto yabelungu.”
Imboni yezimoto yiyo enkulu kunazo zonke izimboni ezikhiqizayo lapha eNingizimu Africa. Ngonyaka wezi-2017 imboni ekhiqiza izimoto yiyo ebeyihamba phambili ngemikhiqizo yaseNingizimu Afrika, ikhiqiza okubalelwa kumaphesenti angamashumi amathathu nantathu.
Imboni yezimoto ithwele kanzima kulo nyaka wezi-2019 ngenxa zokwehla kwamandla omnotho. Ngenyanga kaNdasa kuyithwalise kanzima ukulindela ukhetho, kanye nokuthi abasebenzi banezikhalo ezingenelisekile ngendlela ebagculisayo. Bahlalele ovalweni abakhiqizi bezimoto uma bebuka isimo somnotho. NgoNhlolanja kulo nyaka izinga lokuthengwa kwezimoto lehle ngamaphesenti ayishumi nantathu uma kuqhathaniswa neminyaka edlule. Akusiyo into encane leyo, futhi ikhombisa ngokusobala ukuthi wonke umuntu kumele abhukule ukwenza izinto ezizokhuthaza lemboni. Lokhu kubiza ukuhlolisisa izindlela zokwenza ibhizinisi kulemboni. UMnumzane Thomas Shafer ongumpathi-jikelele kwimboni yakwaVW uyagcizelela kulendaba ngokuthi enye yezindlela zokuguqula ukusebenza wukwandisa abakhiqizi balapha eNingizimu Afrika, okumanje izinga lingaphansi kwamaphesenti angamashumi amane. Ngamanye amazwi, eminingi imikhiqizo esetshenziswa kulemboni itholwa kubakhiqizi abangaphandle kweNingizimu Afrika. Uma imikhiqizo yokwakha imoto itholakala kulelizwe, izindleko zokukhiqiza zingehla kuhlangabezeke izinkinga zomnotho.
Kubalulekile ukuthi nathi boHlanga sibhukule sizimise ngomumo ukuba ngabakhiqizi abazokwazi ukungena kule mboni. Embhalweni olandelayo sizobuka lemboni ngokujula sibuke ukuthi aboHlanga bakuphi nokuthi yimiphi imizamo eyenziwayo ukukhuthaza ukungena kwaboHlanga embonini yemoto.
Umumo weNingizimu Afrika emazweni eG20
Kugoqiwe ngeBhola leNdebe yoMhlaba kwabesifazane
Ukufundisa zonke izifundo ngolimi lwesiZulu
Umyalezo obheke kwiMeya entsha ye-Ethekwini
Isicelo sokwedluliswa kwecala singachithwa uma singenamthelela
© 2019 - Bayede News. All Rights Reserved.
Website Design: IgununduAgency